5 Inta badan Webiyada Beautiful In Europe Si Baadh | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > 5 Inta badan Webiyada Beautiful In Europe Si Baadh
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 02/07/2021)
ma waxaa jira dad badan hababka gaadiidka yaa ka khayr badan tareenka, laakiin safar webi yimaado quruxsan dhow! Waxaa raaxo ah iyo leisurely hab in la ogaado farxaan iyo Europe, magaalooyinka maxaa yeelay,, gobollada, iyo dalalka ka soo baxaysa aragtida cusub. Waxaad sahamin karaan meelaha xiiso in laga yaabaa in si kale lagu waayi ka faahfaahin fasax ah. La yaab ma laha dad badan doortaan wadada muuqaal dabiici ah inay soo aragto 5 Inta badan Webiyada Beautiful In Europe Si Baadh!
1 oo ka mid ah 5 Inta badan Webiyada Beautiful In Europe: Danube
Dhererka: 1,783 miles / 2,870km
Jidka: Jarmalka – Black Forest in ay Badda Madow
Qaado dalxiisayaal webiga Danube haddii aad ku raaxaysan taariikhda, iyo cunto fiican,, iyo waayo-aragnimada aan la ilaawi karin. Safraan magaalada casriga ah ee Amsterdam ee Yurubta galbeed on Danube in si tartiib tartiib ah dago Yurubta Bari maraayay durkiya taariikhi ah, sida Salzburg (magaalada music), ama ku boodaan off in ay booqdaan ulood oo baabba 'in rayn Budapest. Tani collection of doonyaha webiga Yurub kaa xaaqi doonaa meel dreamlike leh khibrado cusub buuxiyey, indhaha, dhawaaqyada, ur, iyo kulanka gastronomic.
Salzburg in Tareenadu Passau
2 oo ka mid ah 5 Inta badan Webiyada Beautiful In Europe: Rooney
Dhererka: 505 miles / 813km
Jidka: Swiss Alps The Badda Mediterranean
Rhone River webi taariikhi ah Switzerland iyo Faransiiska iyo mid ka mid ah biyaha ugu muhiimsan ee Yurub. Waxaa layaabna ma leh waa liiska of The our 5 Inta badan webiyada Beautiful in Europe si ay u sahamiyaan.
Waxaa webiga oo keliya waaweyn si toos ah dal u Badda Mediterranean oo qaatay on si fiican waxaa Alpine. Tani waxay arrin ka duwan ay deriskiisa waqooyiga, Rhine ah, taas oo ka dhigeysa in dhammaan sifooyinka ay Alpine ka dambeeya marka ay ka baxo Switzerland. Koorsada muuqaal dabiici ah oo inta badan baana Rhone ah, sifooyinka biyaha dal waxa ku jira, iyo sida ay u badan ayaa la isticmaalay by aadanuhu ayaa lagu soo qaabeeya by saamayn buuraha, xaq u soo degin inuu afka webiga, halkaas oo dheesha calaamadeysa Rhone ee barafka Alpine lagu qaado biyaha kulul ee Mediterranean-ka.
3 oo ka mid ah 5 Inta badan Webiyada Beautiful In Europe: Ugu weyn
Dhererka: 326 miles / 525km
Jidka: Kulmbach inay Mainz, Jarmalka
River Main waa 327 miles dheer iyo waa webiga ugu dheer ku yaalaan oo gebi ahaanba in Jarmalka. Iyo Wabiyadan socota min bari ilaa galbeed, Main ku biiray River Rhine ee Mainz, Jarmalka. River Main wuxuu ku bilaabmaa ee gobolka Upper Franconia ee Germany; si kastaba ha ahaatee, webiga waxaa loo arkaa kaliya navigable u dhexeeya Bamberg iyo Mainz.
Gudaha 1992 ah Kanaalka Main-Danube furay, kaas oo isku xira webiyada Main iyo Danube. kanaalka waxay bilaabatay Bamberg oo la kulmay River Danube ee Kelheim, Jarmalka. Tani waxa hadda loo biyo mareen weyn u ogolaanaya maraakiibta rakaabka iyo maraakiibta ganacsiga yar yar labadaba in ay u safraan inta u dhaxaysa badda woqooyi si galbeed iyo Badda Madow bari.
Cologne si Tareenadu Mainz
Frankfurt inay Tareenadu Mainz
Berlin si Tareenadu Mainz
Brussels si Tareenadu Mainz
4 ee 5 Inta badan Webiyada Beautiful In Europe: uu
Dhererka: 485 miles / 780km
Jidka: Waqooyi Galbeed ee Dijon, France u Ingiriisi Channel in Le Havre
Qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka ay leeyihiin feature a in iyaga tilmaamaysaa, qeexayaa jiritaankooda, oo u dhaqmo sida garaaca wadnaha ah in waddaa wadnaha magaalooyinka. River waxba reebin ee Paris waa maxay River Thames waa in London, Danube si Budapest. Waa xuddunta, aagga dalxiisayaasha u haajiraan, halkaas oo ay u dhawraan oo u soo jiidashada caan iyo kulanka gastronomic.
Cruise reebin A waa waajib!
Waxaan u malaynayaa in aad macno dooran kartaa oo keliya ku saabsan mid ka mid ah doonyaha reebin ku bixiyey oo aan aad ceeboobi doono! awoodaan si ay u arkaan sida ugu fiican ee Paris Waxaad noqon doontaa, magaalada jacaylka. Doorashadaada waa kala duwan. Haddii aad waqti ku koobnayn, doonyaha waxaa laga heli karaa in ay ku habboon waqti aad u gaaban waxaa. Waayo, vibe dib u dhigeen-dheeraad ah a, raaxaystaan ​​safar qado waxba reebin a, fiirsadaan dul Tower Eiffel iyo museum Louvre ah, sida aad say. Ama aad isku dari kartaa kuwan soo jiidashada iyo safar for Combo gaar ah, fuulaan dabaqa labaad, bogi fikradaha, ka dibna safar doon, riyaaqayaa casho iyo a galaas oo khamri ah. xataa Waxaad qaadan kartaa in a show Moulin Rouge haddii aad sidaas, malana? Si aad u aragto Paris dhabta ah, safar reebin ah waa waajib.
Pick The Last Waayo, Webiyada Yurub – biyaha Dutch
Dhererka: 528 miles / 850km
Jidka: Netherlands ayaa in badda woqooyi
Webiyaasha yar, kanaalada, iyo badda gudaheeda ee Nederland ayaa sameeya marinnada biyaha ee Dutch-ka, iyo socdaalka halkan waa hab nasasho leh oo lagu sahamiyo Yurub iyo dalalkeeda hoose ee soo jiidashada leh. Dalxiisyada ku yeeshay magaalooyinka Amsterdam iyo Rotterdam inta badan muuqan on itineraries, laakiin highlight ee a Dutch biyaha webiga safar waa taxanaha ah ee 19 Falkenberg dhab ah in saf bangiyada canal ee gobolka of Kinderdijk. Diyaarso kaamirooyinkaaga.
Sidoo kale cajiib ah waa qaab ubaxa ee Keukenhof, beerta ubaxa ugu weyn. katiifadaha sitaa mid ah midabo kala yihiin abuuray by toddoba milyan oo tulips, daffodils, iyo ubaxyada kale - sida ugu fiican ee ay u fiican yihiin inta lagu jiro Abriil iyo Maajo. Raadi doonyaha gaaban ee xilliga sanadkan si gaar ah diiradda u beeraha rabarka Dutch.
All saarnaa! Kitaab ku tababaro tikidhka safarkaaga Wabiga Save A tareenka maanta iyo helitaanka dalxiis!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Inta badan Webiyada Beautiful In Europe Si Baadh” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-rivers-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Reer Yurub	#imonaboat	#dalagga webiga	#safarro webiyo